Very ny fitoriana an'i Apple amin'ny Epic Games i Apple ary ny vokatr'izany dia nametraka mialoha | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 14/09/2021 19:43 | Nohavaozina amin'ny 14/09/2021 22:45 | fampiharana
Herintaona lasa izay mizara ny disadisa eto amin'ny bilaogy izahay izany dia noforonina teo anelanelan'ny Apple sy Epic Games noho ny antony namoahan'ity farany fanavaozana ny Fortnite Battle Royale izay namelana ireo mpilalao hisafidy ny toerana hanaovana ny fandoavany vola sy hahafahana manala ny vaomiera 30% takin'i Apple.
Noho io antony io dia nesorin'i Apple tamin'ny voalohany ilay fampiharana avy amin'ny fivarotana fangatahana izay niafara tamin'ny fitoriana nataon'ny Epic Games niampangana an'i Apple ho ampihimamba iray ary avy eo dia nisy mpandraharaha tsy miankina maro hafa sy mpandraharaha malaza nanatevin-daharana ny antony.
Tamin'ny voalohany dia tsy dia tsara loatra tamin'ny lalao Epic ny zavatra voalohany, saingy toa io fihetsika heverin'ny maro fa famonoan-tena io dia nisy vokany izay nametraka mialoha ireo fomba fitantanana azy.
Ary izany tokoa Vao tsy ela akory izay ny mpitsara Yvonne González Rogers dia namoaka didy mandrara ny raharaha Epic vs. Apple ny zoma, mametraka fameperana vaovao amin'ny lalànan'ny Apple App Store sy ny famaranana ny fifanolanana ara-dalàna mangidy.
Ao anatin'ny didim-pitsarana vaovao, Apple dia manana baiko fameperana maharitra
«Izany dia mandrara ny mpamorona tsy hampiditra ao amin'ny rindranasan'izy ireo sy ny metadata bokiny, ny rohy ivelany na ny fiantsoana hafa hampihetsika ny mpanjifa amin'ny fomba fividianana, ankoatry ny fividianana fampiharana sy fifandraisana amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny teboka fifandraisana azo an-tsitrapo avy amin'ny mpanjifa amin'ny fisoratana anarana kaonty ao amin'ilay fangatahana ”.
Raha tsorina Ny fampiharana iOS dia tokony ho afaka hitarika ny mpampiasa amin'ny safidy fandoavam-bola mihoatra ny atolotry ny Apple. Vinavinaina hanan-kery io didy io afaka 90 andro, ny 9 desambra, raha tsy mandray fanapahan-kevitra hafa ny fitsarana ambony.
Azo inoana fa tamin'izay, marika elektronika mpanjifa lehibe manao antso avo mba hanohitra ny fehin-tenin'ilay sazy. Ny kaomisiona takian'i Apple amin'ny rafi-fampiharana ao anatiny dia loharanom-bola ho an'ny vondrona, satria mahatratra 15 na 30% amin'ny sandan'ny fividianana izy ireo.
Tamin'ny didim-pitsarana iray hafa, nilaza ny fitsarana fa ny Epic Games dia nandika ny fifanarahana nifanaovany tamin'i Apple rehefa nampihatra ny rafitra fandoavam-bola hafa tao amin'ny app Fortnite. Vokatr'izany, Epic dia tsy maintsy mandoa ny Apple 30% amin'ny vola miditra rehetra voangona amin'ny alàlan'ny rafitra hatramin'ny fampiharana azy, izay mihoatra ny $ 3,5 tapitrisa.
Taorian'ity fandresena Epic ity dia teo noho eo ny valiny: ny zoma, nizara ny faratampony lehibe indrindra ny ampahan'ny Apple tao anatin'ny volana. Ny tahiry dia nilatsaka 3,3%, ny fihenany lehibe indrindra hatramin'ny 4 Mey, nanosika ny kapitalin'ny mpanamboatra iPhone hatramin'ny $ 85.000 miliara.
Nilaza ny mpandinika fa na dia mety hisy fiatraikany amin'ny karamain'ny serivisy an'i Apple aza io hetsika io, mpamily fitomboana lehibe iray tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia mbola tsy mazava ny vokatr'ilay valinteny, ho elaela ihany, ary tsy hisolo tena iray monja. .
Amin'ny ankapobeny, Toa nahazo izay tadiaviny i Epic: ny fahafaha-manolotra ny rafitra fandoavam-bola hialana amin'ny kaomisiona 30% ampangain'i Apple.
Raha ny marina, Apple dia tsy afaka mametra ny tompona iPhone intsony amin'ny fampiasana ny rafitra fandoavam-bola (izay mety ho kapoka amin'ny maodelin'ny raharaham-barotra ao amin'ny App Store), saingy ny fahamarinana dia tsy nanaraka ireo fiampangana ny fitondran-tena tokana sy fanoherana ny fifaninanana. Ho fanampin'izany, Epic dia nodidiana handoa onitra an'i Apple ihany koa noho ny fametrahana ny rafitra fandoavam-bolany ao amin'ny kinova iOS an'ny Fortnite.
aza Epic Games dia mbola voarara amin'ny fivarotana app Ary, araka ny didim-pitsarana, Apple dia manan-jo rehetra hitazona ny mpanonta ny lalao tsy ho eo amin'ny sehatra anaovany. Noho izany, Epic dia niady ho an'ny zon'ny mpamorona hafa mba hanolotra rafitra fandoavam-bola hafa, saingy tsy ho azonao ny manararaotra azy ireo.
Apple dia miankina indrindra amin'ireo mpandraharaha lehibe toa an'i Epic, izay manana tombony ampy handoavana komisiona 30% ary hamokatra ny ankamaroan'ny vola azo avy amin'ny App Store.
Zava-dehibe, ny didin'ny fitsarana dia tsy voafetra ho an'ny lalao na fandoavam-bola amin'ny fampiharana ihany, ka tsy mazava ny ampahany amin'ny toby mpamorona handao ny rafitra fandoavam-bolan'i Apple. Raha mitranga izany dia mety terena hiala amin'ny rafitra komisiona i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Very ny fitoriana an'i Apple amin'ny Epic Games i Apple ary ny vokatr'izany dia nametraka mialoha
Jose Pepe dia hoy izy:
Nihemotra tanteraka ianao, "nanipy" anao tamin'ny fehin-kevitra diso ...
Valiny tamin'i José Pepe
FRD dia hoy izy:
Inona no atao hoe $ 4,5 tapitrisa ho an'ny Epic? Tsy inona izany fa izay vokariny isa-minitra.
Valiny amin'i FRD
Zeke dia hoy izy:
Nanaraka an'ity tranonkala ity nandritra ny taona maro aho, saingy ity vaovao ity dia mampiseho ny tsy fahazoana mazava ny tena sazy nomen'ny mpitsara. Azafady mba avereno jerena ny fampahalalana sy ny fizahana indroa alohan'ny handefasana tsy misy dikany. Miarahaba.
Mamaly an'i Zeke
Tsara ho an'ny fahalalahana, ratsy ho an'ny Linux fa nisotro ronono tamin'ny Rocket League izy ireo ary tsy liana amin'ilay quota ho an'ny Fortnite.